Ukutyunjwa: Yonke into e-Inye yokuCwangciswa kwe-Intanethi kwiShishini lakho | Martech Zone
NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 NgoLwesihlanu, Oktobha 23, 2020 Douglas Karr
Amashishini aneenkonzo ezisekwe kwinkonzo ahlala ejonge iindlela zokwenza kube lula kubathengi ukuba bathenge iinkonzo zabo okanye bagcine ixesha labo. Isixhobo sokucwangcisela ukuqeshwa njenge-Appointy yindlela engenamthungo yokufezekisa oku kuba unakho ukubonelela ngokulula kunye nokuguquguquka kokubhukisha nge-24 × 7 kwi-Intanethi kunye nezibonelelo ezongeziweyo zentlawulo ezikhuselekileyo kwi-Intanethi, izaziso zokubhukisha kwangoko, kunye nokubhukishwa okungaphindi kabini.
Ayisiyiyo loo nto, isixhobo sendawo yonke esifana Ukutyunjwa inokukunceda ulawule ishishini lakho ngokukuko, ujonge imveliso, kwaye ukhulise ishishini lakho ngeempawu ezifanelekileyo zokuthengisa.
UkuCwangciswa kokuCwangciswa kwe-Intanethi: Isisombululo ngokujonga ngokubanzi
Ukutyunjwa isoftware yokuqeshwa kwesoftware ebonelela ngeqonga ekulula ukulisebenzisa ukubhukisha kwi-Intanethi, ngezikhumbuzo ezizenzekelayo, ukuqhubekeka kwentlawulo, usetyenziso lweselfowuni, nokunye okuninzi! Kuyanceda ukuphatha nokukhulisa ishishini lakho ngokufumana abathengi abatsha kunye nokugcina esele ikho.
Ngaphezulu kwama-200,000 abanini bamashishini abavela kumashishini ahlukeneyo anje nge-tutoring, salon, spa, ezempilo kunye nokuqina, iinkonzo zobungcali, urhulumente kunye necandelo labucala, iiofisi zonyango, imisebenzi yeshishini, kunye namaqela, njl njl.
Ukuqeshwa kunceda ishishini lakho ngezi zibonelelo zilandelayo:
24 × 7 Ukubhukisha kwi-Intanethi
Ngokuqeshwa, abathengi bakho banokwenza ishedyuli yokuqeshwa kunye nawe nanini na, naphi na, xa kufanelekile. Isebenza njenge-24 × 7 yokwamkela iindwendwe, elawula ishedyuli yakho kwaye ikusindise kwilahleko yokubhukisha ngesandla usebenzisa ifowuni okanye i-imeyile. Abathengi banokufikelela kwiphepha lakho lokubhukisha ngokulula kwabo. Ngapha koko, awunakukhathazeka malunga nokulahleka kwexesha lokuqeshwa elibhukishwe ngaphandle kweeyure zakho zeshishini!
Abaxhasi bakho banokuzicwangcisa ngokwabo ngokulula ngenkqubo yokubhukisha elula. Xa kufuneka, banokurhoxisa okanye babeke elinye ixesha kwisithuba semizuzu embalwa! Ukuqeshwa kwakhona kukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso iphepha lakho lokubhukisha ukuze utshatise umfanekiso wakho webrendi.
Isizukulwana seNkokeli esineMigangatho emininzi
Yandisa ukubonakala kweshishini lakho kwi-Intanethi kwaye ubekhona apho abathengi bakho-uGoogle, u-Facebook okanye u-Instagram! Ukudityaniswa kokubhukisha okutyunjiweyo kukunceda usebenzise amandla eendaba ezentlalo ukuze ufumane abathengi abaninzi.
Ngokuqeshwa, ungongeza iqhosha 'leNcwadi ngoku' kwiGoogle MyBusiness, kuFacebook, nakwiziphatho ze-Instagram ukuguqula iindwendwe ezisebenza kakhulu zibe ngabathengi abahlawulayo. Iqhosha lencwadi ngoku liya kubangela ukuba abatyeleli beprofayile bacwangcise ixesha lokuqeshwa kunye neshishini lakho kanye ngaphakathi kweso sicelo.
Ngokugcina kwethu ngokudityaniswa kukaGoogle, abathengi bakho banokukufumanisa ngokulula kwaye bakubhukishe ngqo kwiGoogle Search, iimephu nakwiwebhusayithi yeRwG. Ngale ndlela, uya kuvelisa abathengi abatsha ngaphandle kokuhlawula i-dime!
Akukho mboniso woKhuselo
Ukuqeshwa kukuvumela ukuba uthumele izikhumbuzo nge-imeyile kunye neSMS kubaxhasi bakho ngaphambi kokuqeshwa ukunciphisa ukungabikho kwemiboniso kunye nokucinywa kwemizuzu yokugqibela. Abaxhasi bakho banokuhlengahlengiswa ngokulula ukuba abakwazi ukuyenza okanye ukwazisa kwangaphambili ukuze uzalise iindawo ezingenanto kwaye ungalahleki kuyo nayiphi na ingeniso.
Ukuqeshwa kudityaniswa neeapps zokuhlawula ezithandwayo njengePaypal, iStripe, isikwere ukubonelela ngeendlela zokuhlawula ngokukhawuleza kubathengi ngexesha lokubhukisha okanye ukuphuma.
Unokukhetha ukwamkela ngokupheleleyo, ngokukhethekileyo, okanye akukho ntlawulo kwi-Intanethi ngexesha lokubhukisha. Ukuhlawulwa kwangaphambili kwi-Intanethi kunokukunceda uphephe ukubhukisha okungaqhelekanga kunye nokubonelela ngokhuseleko lokurhoxisa.
Umdibaniso wePOS wokudibanisa isikwere sokugcwalisa ngokuzenzekelayo kugcwalisa iinkcukacha zokuqeshwa kwaye kuqinisekisa inkqubo yokuphuma ngokukhawuleza kunye nokuthe tye kwabaxhasi bakho.
Ukucwangcisela iKhalenda yexesha lokwenyani
Ikhalenda yexesha lokwenyani ekuvumela ukuba ujonge ishedyuli yosuku lwakho ngokukhangela, kunye neeshedyuli ezininzi zabasebenzi kwiscreen esinye. Chonga naziphi na izikhewu kwaye ugcwalise indawo engenanto yokulawula ixesha elifanelekileyo.
Ungakutshintsha ukufumaneka kwakho nangaliphi na ixesha kwikhalenda. Ngapha koko, ikuvumela ukuba uphinde ucwangcise ngokulula isixhobo sokutsala kunye nokwehla.
Ukonyulwa kukwaxhasa ukuvumelanisa ngeendlela ezimbini kunye neekhalenda ezithandwayo zobuqu okanye ezobuchwephesha ezinje ngeGoogle Cal, iCal, Outlook, nokunye okuninzi ukuze uhlale ungaphezulu kwishedyuli yosuku lwakho.
Abasebenzi noLawulo lwaBathengi
Ukuqeshwa kukuvumela ukuba unike abasebenzi bakho iinkcukacha zabo zokungena ngemvume, ezibavumela ukuba balawule ishedyuli yabo, ukubakho, kunye namagqabi. Inokukunceda ekulawuleni ngokuqatha abasebenzi bakho, ngokwabela abaqeshwa kwezona zixhobo zisemagqabini / ezixakekileyo, kwaye yonyusa imveliso.
I-CRM yokutyumba ikuvumela wena kunye nabasebenzi bakho ukuba nizise amava abaxhasi abodwa ngokulandela indlela abaziphatha ngayo. Gcina iinkcukacha ezibalulekileyo njengeempendulo zeefom zokutya, umsebenzi wokuqeshwa, imbali yokuthenga, amanqaku kunye nokunye kwindawo enye.
Unako ngokwamaqela akrelekrele ukuba nabaxhasi bakho ngokusekwe kwiimpawu eziphambili ezinje ngomsebenzi, ingxelo kunye nokunyaniseka ukugxila kubathengi abalungileyo kwaye uhambise imizamo yakho ngokufanelekileyo.
Ngesixhobo sokubhukisha esonyuliweyo, unokulawula lonke ishishini lakho kwifowuni yakho. Lawula ukucwangciswa, iintlawulo, iikhalenda zabasebenzi, ukuqeshwa, nokunye okuninzi kusetyenziswa i-app ekuhambeni.
Ukudityaniswa kokutyunjwa kunye ne-Zoom kukuvumela ukuba ucwangcise ukubonisana nge-Intanethi, iintlanganiso ezikude, iinkomfa, iiklasi ezibonakalayo, okanye ii-webinars. Ngale ndlela unokwandisa ukufikelela kweshishini lakho kwimimandla yamaxesha ahlukeneyo, kwihlabathi liphela.
Indawo nganye yokubhukisha ivelisa ikhonkco yentlanganiso yeZoom kwaye iklasi ebonakalayo okanye iseshoni yongezwa ngokuzenzekelayo kwikhalenda yakho.
Iinkcukacha zokuqeshwa ezibonakalayo ziboniswa kwiphepha lokuqinisekisa lokubhukisha, kwaye zithunyelwe nge-imeyile / isiqinisekiso sombhalo kunye nezaziso zokukhumbuza kubo bonke abathathi-nxaxheba. Ukujoyina, abathengi kufuneka bacofe ngokulula ikhonkco le-Zoom kunye ne-Zoom app yabo iza kuphehlelelwa!
Uhlalutyo kunye nokunika ingxelo kukunceda ukuba ulandele izalathi zentsebenzo eziphambili ezinje ngenani lokuqeshwa, ukwaneliseka kwabaxhasi, ukuthengisa, ukusebenza kwabasebenzi kunye nangaphezulu ngexesha langempela. Soloko uhlala ngaphezulu kokusebenza kwakho kwaye wenze izigqibo eziqhutywa yidatha ukuphucula ezi metric zeshishini.
Ukuseta ukutyunjwa kwishishini lakho ngamanyathelo ama-3 alula:
Cwangcisa - Faka iinkonzo zakho kunye neeyure zokusebenza. Yongeza i-buffers, vimba amaxesha ukuphinda ishedyuli yobomi bakho bokwenyani.
isabelo - Yabelana nge-URL yekhasi lakho lokubhukisha kunye nabaxhasi. Yongeza kwiwebhusayithi yakho, kuGoogle Bhizinisi lam, ku-Instagram, ku-Facebook nakwezinye iindlela.
Yamkela -Yamkela ukubhukisha kubathengi 24 × 7. Vumela abathengi bazenzele ishedyuli, bacwangcise kwakhona, kwaye barhoxise ngokufanelekileyo.
Ukutyunjwa yenye yeenkokheli zeshishini kulwakhiwo lolawulo lwesizinda. Ngemodeli yamaxabiso e-freemium, ixhasa amashishini abo bonke ubungakanani. Ikwaphuhlisa ishedyuli eyenzelwe ukwenziwa kwesoftware elungele amashishini amakhulu / amashishini ukulungiselela ukuthengisa uphawu kunye neemfuno ezithile zokucwangciswa.
Ukulungele ukukhulisa ishishini lakho ngoKonyulwa?
Qalisa ukulingwa kwakho kweentsuku ezili-14 namhlanje!
tags: utyunjwaqeshaikhalendaukucwangciswa kokuqeshwa kwi-IntanethiIshedyuli ekwi-intanethiyenza nkuluzoom ukuqeshwa